काठमाण्डौ, १ माघ । विवेकशील साझा पार्टीले उज्ज्वल थापा समूहले छापामार शैलीमा पार्टी फुटाएको निष्कर्ष निकालेको छ । दुई दिनसम्म बसेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकपछि मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डा.सूर्यराज आचार्यले थापा समूहले हतार र अप्रत्याशित किसिमले छापामार शैलीमा पार्टी विभाजन गरेको बताए । साथै विवेकशील साझाको केन्द्रीय समितिले पछिल्लो अवस्थालाई अनपेक्षित र दुखद घटनाको रुपमा मूल्यांकन गर्दै पार्टीका संयोजक रवीन्द्र …
विवेकशील साझा पार्टी फुटेको छ। पार्टीका एक संयोजक रहेका उज्वल थापाले शुक्रवार नै निर्वाचन आयोग पुगेर नयाँ दलको लागि निवेदन दिए । केन्द्रीय सदस्यमध्ये १६ जनाले निर्वाचन आयोग पुगेर निवेदन दिएका हुन्। २०७४ साउन ११ गते विवेकशील र साझा पार्टीबिच एकीकरण भएको पार्टी किन फुट्यो ? नागरिक स्तरमा मात्र होईन, यसै पार्टीका नेताहरु समेत आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका बेला विवेकशील साझा …
काठमाडौं – विवेकशील साझा पार्टीको एक पक्षले नयाँ दल दर्ताका निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएपछि आरोप प्रत्यारोप सुरु भएको छ। उज्वल थापासहितका १६ जना केन्द्रीय सदस्यले पार्टी विभाजन गरेपछि संस्थापन पक्षले वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणमा घात गरेको आरोप लगाएको छ। शुक्रबार बेलुका विज्ञप्ति जारी गर्दै विवेकशील साझा पार्टीका प्रवक्ता डा. सूर्यराज आचार्यले पार्टी छाडेर जानेहरुले वैकल्पिक शक्ति निर्माणको पवित्र उद्देश्यलाई धोका …
काठमाडौं । सरकारले नयाँ सरकारी मर्यादाक्रम सार्वजनिक गरेको छ, जसमा जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारीभन्दा माथि राखिएको छ । २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनपछि सरकारले राष्ट्रपतिलगायत राष्ट्रिय जीवनका बिभिन्न क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरुको मर्यादाक्रम हेरफेर गरेको थियो । त्यसमा गाउँपालिका अध्यक्षलगायत स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई नेपाली सेनाका क्याप्टेनभन्दा पनि तल राखिएपछि विवाद भएको थियो । त्यस्तै नगरपालिकाका मेयरलाई सहसचिवभन्दा तल राखिएको थियो । मर्यादाक्रममा असहमति जनाउँदै …
पोखरा २५ पौष । पोखराको वडा नं १५ कि एक किशोरीले आँफूमाथि विभिन्न बहानामा धम्क्याउँदै बारम्बार बलात्कार गरेको आरोप लगाउँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा एक यूवक विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी छिन । पोखरा १५ कि १९ वर्षिया एक किशोरीले आफूलाई पोखरा १५ बस्दै आएका नसिब गुरुङले असैह्य र निर्मम व्यवहारका साथ बारम्बार बलात्कार गरेको आरोप सहित जाहेरी दिएकी हुन् । विभिन्न …
नेपाल आइडल रवि ओडलाई मातृ शोक:आमाको करेन्ट लागेर मृत्यु
११ पुस,धनगढी । दोस्रो नेपाल आइडल बनेका रवि ओडकी आमाको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको छ । बुधबार बिहान सात बजे पानी तान्ने मोटर चलाउने क्रममा करेन्ट लागेकी ४५ वर्षीया विष्णा ओडको उपचारका लागि अस्पताल लैजाने क्रममा बाटैमा मृत्यु भएको हो ।करेन्टलागेपछि घाइते रहेकी उनलाई बिहान पौने ९ बजे सेती अञ्चल अस्पताल पुर्‍याइएलगत्तै चिकित्सकहरुले मृत घोषित गरेका थिए । कञ्चनपुरमा आयोजित विभिन्न …